कयौं फेसबुक प्रयोगकर्तालाई आतंकित बनाउने को हुन् मधु शाह ?
दुबई, जेठ ६ । फेसबुकमा अचेल एक महिला अकाउन्ट निकै भाइरल भइरहेको छ । कयौं प्रयोगकर्ताले उनको बारेमा टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
काठमाडौं, जेठ ५ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई लक्षित ‘शुभयात्रा’ नामक ‘मोबाइल एप’ सार्वजनिक गरिएको छ ।
पुरानै प्रविधिको भरमा मौसमको जानकारी
ताप्लेजुङ, जेठ २ । भौतिक संरचना र आधुनिक उपकरणको अभावमा ताप्लेजुङस्थित पूर्वी क्षेत्रीय हावापानी फिल्ड कार्यालयले अनुमान र पुराना प्रविधिको भरमा मौसमसम्बन्धि जानकारी दिनपर्ने बाध्यता ब्यहोरिरहेको छ । अत्याधुनिक प्रविधि नहुँदा आफूहरुले पुरानै प्रविधिको भरमा मौसमको जानकारी दिनुपर्ने बाध्यता रहेको कर्मचारीको भनाइ छ ।
इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरुलाई एनसेलद्धारा छात्रवृत्ति प्रदान
काठमाडौं, वैशाख ३१ । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, केन्द्रीय क्याम्पस पुल्चोकमा स्नातकतहमा अध्ययनरत् उत्कृष्ट विद्यार्थीहरुले एनसेल छात्रवृत्ति तथा उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् ।
चीनको युनान टेलिभिजन र नेपाल टेलिभिजनबीच महत्वपूर्ण सहमति
काठमाडौं, वैशाख ३१ । चीनको युनान टेलिभिजन र नेपाल टेलिभिजनबीच सहयोग, कार्यक्रम सामग्री र क्षमता अभिबृद्धि तालिम आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको छ ।
नेपाल र चीनलाई जोड्यो अप्टिकल फाइबरले
काठमाडौं, वैशाख ३१ । नेपाल टेलिकमले काठमाडौंबाट धादिङको गल्छीदेखि रसुवाको धुन्चे हुँदै चीनको सीमा रसुवागढीसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सकेको छ ।
सावधान ! २७ करोडभन्दा बढी मेलको पासवर्ड चोरी भयो
लन्डन, वैशाख ३० । तपाईको ईमेल अकाउन्छ छ भने सावधान हुनुहोस्, ह्याकरको एक समूहले २७ करोडभन्दा बढी ईमेल अकाउन्टको पासवर्ड फेला पारेको छ ।
एनसेलद्धारा सन् २०१६ मा १२ अर्ब लगानी गर्ने घोषणा
काठमाडौं, वैशाख २७ । एनसेलले सन् २०१६ मा करिब १२ करोड अमेरिकी डलर (झन्डै १२ अर्ब रुपैयाँ) दुरसन्चार पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ ।